L10001 Course Introduction - The Well Finisher
L10000 Course Introduction
L10001 Course Introduction00:32:38
L10100 Noun (Definition)?
L10101 Definition of Noun32:38
L10102 Proper Noun32:38
L10103 Common Noun00:32:38
L10200 Countable & Uncountable Noun
L10300 Noun & Number
L10400 Noun & Article
L10500 Possessive Case?
L10600 Pronoun (Definition)?
L10700 Pronoun & Person?
Pronoun & Person
L10800 Attributive & Predicative Adjective?
Attributive & Predicative Adjective
L10900 Positive Comparative Superlative Adjective
L1300 Course Review
L10001 Course Introduction
မင်္ဂလာပါ။ The Well Finisher Basic English Course (Level 1) အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း အပိုင်း (၁) ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆရာမောင်ခိုင် (The Well Finisher) ပါ။ ဒီသင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချပေးမယ့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်မီလှပထည်ဝါတဲ့ တိုက်တာ အဆောက်အဦးတွေကို ကြည့်ပြီး အံ့ဩမိန်းမော ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအဆောက်အဦးတွေရဲ့ အောက်ခြေ မြေကြီးအောက်က ခိုင်ခံ့နက်ရှိုင်းစွာ ချထားတဲ့ အုတ်မြစ်ကိုတော့ မမြင်ရပါဘူး။ အခြေခံအုတ်မြစ် ခိုင်မာမှသာလျှင် လှပခြင်းဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ၊ စကား (သဒ္ဒါ) သင်ရာမှာလည်း ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ။ အောက်သက်ကျေ အခြေခံကောင်းပါမှ လက်တွေ့အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ အမှားအယွင်းကင်းပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်း (၁)မှာ ပါဝင်တဲ့ သင်ခန်းစာ အစိတ်အပိုင်း တခုစီတိုင်းဟာ အခြေခံအုတ်မြစ် ခိုင်မာဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး အရေးကြီးတဲ့အတွက် သေသေချာချာ အလေးအနက်ထားပြီး ဝရိယစိုက်ထုတ် သင်ယူသွားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်း(၁)မှာ ပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာများထဲမှာ သင်သိနှင့်ပြီးသား အချက်အတော်များများ ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆိုရင်လည်း အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တဆင့်မှာ ပါဝင်လာမယ့် သင်ခန်းစာများကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ဤအခြေခံ အနက်ဖွက်ချက်နှင့် နည်းဥပဒေသများ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဤအပိုင်း(၁)ကို လေ့လာလိုသူတိုင်း အခမဲ့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Well Finisher Basic English Course အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း အပိုင်း(၁)ကနေ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ နောက်သင်ခန်းစာမှာ တွေ့ရအောင်။
Basic English & Life Enriching Courses
© 2021 The Well Finisher